Global Voices teny Malagasy » Iza No Milaza Hoe Afaka Manapaka Ny Google Ianareo? Shinoa Iray Mitory Ny Telco Ary Mangataka Valiny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Oktobra 2014 11:14 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Lalàna, Mediam-bahoaka, Sivana
Sarin'i Wang Long ao amin'ny Weibo.
Tsy afaka nidirana  tany amin'ny taniben'i Shina, nanomboka ny volana Jona 2014, ireo tolotra Gmail sy Google, ao anatin'izany ny Fikarohana (Search), Fianarana (Scholar), Sarintany (Maps), Fandikàna teny (Translate), ary ny Tetiandro (Calendar) — nihitsoka daholo ireo nialoha kelin'ny nitsingerenan'ny faha 25 taonan'ny hetsi-panoherana teo amin'ny Kianja Tiananmen.
Niray feo nilaza daholo ireo mpampiasa fa tompon'andraikitra amin'ilay fibahànana ny governemanta Shinoa. Fa iza amin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta tokoa aloha no tena tompon'andraikitra eto? Ary lalàna avy aiza no ahafahany manapaka ny Google ary ireo sehatra hafa amin'ny aterineto avy any ivelany, sahala amin'ny Facebook?
Tsy misy antanan-tohatra na làlana efa voafaritr, afaka hametrahan'ireo olom-pirenena shinoa tsotra ny fanontaniana tahaka izany amin'ireo manampahefana. Fa amin'ny maha-mpanjifa azy ireo, manana zo izy ireo ny hangataka ny mba hamalian'ireo mpamatsy tolotra aterineto azy ireo momba izany tsy fahalavorariana eo amin'ny tolotra izany. Nanapaka hevitra ny hihetsika hampihatra io zo io ny mpiasa iray momba ny lalàna, mipetraka ao Shenzhen.
Manenjika ny China Unicom eny amin'ny fitsaràna i Wang Long, faharoa amin'ireo lehibe indrindra amin'ny mpamatsy ny fifandraisana ao Shina, amin'ny tsy fanomezany alàlana hiditra ao amin'ny tolotra Google amin'ny Aterineto. Nanazava tamin'ny alalan'ny media sosialy i Wang fa efa fantany fa kely ny vintana handreseny amin'io raharaha io, kanefa kosa, mba te-hanamafy izy fa manana zo ny hiady amin'ireny fanapahan-kevitra ireny ireo olom-pirenena.
Nandà ho tsy niditra amin'ny resaka fanivànana ny Aterineto moa ny governemanta Shinoa, isaky ny misy zavatra mitranga, ary mamerimberina matetika fa natao hibahanana ny zavatra tsy ara-dalàna ihany ny fanaraha-maso atao amin'ny fidirana ao amin'ny Aterineto, sahala amin'ny zavatra mamoafady, miady amin'ny heloka bevava fangalaram-bola amin'ny Aterineto, ary miaro ny filaminam-pirenena. Mety tafalatsaka tao amin'ireo sokajy voalaza ireo ny fanapahan-kevitra hibahana ireo mpamatsy votoaty ao amin'ny aterineto sy ireo milina fikarohana, saingy sarotra ny mijery hoe ahoana moa io no afaka hampiharina amin'ny tolotra emailaka manokan'ny olona. Hatramin'izao, na iray aza tsy nisy manampahefana ao Shina nanazava ny antony ibahanana ireo fampiasa amin'ny Aterineto ao amin'ny Google sahala amin'ny Translate, Gmail ary ny Scholar nanomboka ny volana Jiona. Nametraka ireo mpisera amin'ny Aterineto Shinoa tao anatin'ny haizina tanteraka nandritra ny taona maro io tsy fahampiana manempotra momba ny fandraisana andraikitra sy fangaraharàn'ny fametrahana ny politikan'ny Aterineto ary ny fampiharana azy io. Andrana hitondràna hazavana eo amin'ny tantara ny fitorian'i Wang eo anatrehan'ny lalàna.
Nohenoina ny 4 Septambra i Wang, tao amin'ny fitsaràna ao amin'ny distrikan'i Shenzhen Futian. Ito ambany ito ny dikan'ny ampahany avy tamin'ny firaiketana ny fandraisana ambavany  azy:
Mpitory: Tsy afaka hidirana ireo vohikala!
Mpitsara: Ry toriana, afaka manamarina ve ianao fa tsy azo hidirana tokoa ireo vohikala?
Toriana: Eny, tsy afaka hidirana izy ireo.
Toriana: Tsy haiko raha afaka lazaiko izany… Mila manontany aho vao afaka mamaly… Afaka hazavaiko io fa tsy amin'ny sehatra ofisialy, mampiasa ny China Telecom aho raha miverina tao an-trano, ary tsy afaka niditra tamin'ireo vohikala ireo koa… (nihomehy ireo olona nipetraka tao amin'ny fitsarana tamin'ilay valinteny)
Mpitsara: Tsy midika hoe tokony ho tompon'andraikitra ny China Unicom raha tsy afaka hidirana ireo vohikala ireo.
Ny nampihambahamba ilay mpisolovava ny China Unicom mba hamaly ilay fanontanian'ny mpitsara momba ny hoe “nahoana ireo vohikala no tsy afaka hidirana” dia mampiseho fa lohahevitra saropady sy tsy azo resahana mihitsy na dia ny fanononana kely fotsiny ny andraikitry ny governemananta tamin'ilay fanapahana aza — tsy afaka manondro fehezan-dalàna napetraka manokana ilay mpisolovava mba hanazavana ilay olana momba ny fanapahana.
Eo amin'ny media sosialy Shinoa, mitohy manasongadina mazava tsara ny fihambahambàn'ilay toriana, sy ilay valinteny tsy ofisialy ireo mpitoraka bilaogy, ary mbola manindry hatrany ilay fanontaniana hoe: Iza marina no tena manampahefana tompon'andraikitra amin'ny fanapahana ireo vohikala avy any ivelany?
Asa avy tamin'ilay fibahanana ny google any Shina. Nalefan'i 蛋蛋-坏坏-蛋蛋 tamin'ny Weibo.
Ny tapatapaky ny volana Aogositra, nisy hetsika tamin'ny Aterineto natao, mba hangatahana tatitra mazava tsara avy amin'ny Minisitry ny Indostria, Fampahalalam-baovao ary ny Teknolojia (MIIT), masoivohom-panjakana naorina ny taona 2008 ho an'ny fametrahana ny fehezan-dalàna ary ny fampandrosoana ny sehatry ny fampahalalam-baovao sy ny teknolojian'ny fifandraisana, ny amin'ny antony ofisialin'ilay fibahanana ny Google, Google+, Youtube ary Gmail. Ny valiny dia hoe “tsy misy ny antontan-taratasy tahaka izany”.
Raha manala ny fandraisan'ny MIIT anjara tamin'ny fibahanana vao haingana ireo vohikala avy any ivelany io, raha araka ny naelin’ ny mpitoraka bilaogy Sinoa iray, Lu Songsong, ilay didy fanapahana dia mety nidina mivantana avy any amin'ny Biraon'ny Fampahalalam-baovao Amin'ny Aterineto eo anivon'ny Fanjakana, ambany fiahian'ny Filankevim-panjakana, izay napetraka ny taona 2011 mba handrindràna sy hanarahana maso ny fitantanana ireo votoaty rehetra ao amin'ny Aterineto, ary mba handraisana an-tànana ny fitantanana ara-taratasy ireo fandraharahàna rehetra mifandraika amin'ny fitanteram-baovao amin'ny Aterineto. Araka izany, vao haingana no namoaka fehezan-dalàna maro ilay filankevitra mikasika ireo tolotra fandefasana hafatra eo noho eo amin'ny finday. Fa mety koa miankina amin'ny Vondrona Mpitarika Ny Asa momba ny Fiarovana ny Aterineto sy resaka Informatika, rantsana iray tarihan'ny Filoha Sinoa Xi Jinping ary naorina ny Febroary 2014 mba hisahana ny momba ny olan'ny fampahalalam-baovaon'ny firenena.
Raha afaka nofantarin'ireo olom-pirenena hoe iza ilay manampahefana namoaka sy nankatò ireo fangatahana fibahanana ny vohikala ao Shina, mba hazavazava kokoa ny ankamaroan’ ireo zavatra araka ny lalàna sy ara-teknika mikasika ny fanivanana tranonkala ao Shina. Fa misy ireo feo hafa ao amin'ny adihevitra nilaza fa maka làlana hafa ireo manampahefana. Tao aminà lahatsoratra iray vao haingana, nanonona  manampahaizana iray ao Beijing momba ny fiarovana eo amin'ny seraseran'ny aterineto izay nanameloka ny Google ho mpanivana ireo manampahefana ny Global Times, mpitondra tenin'ny antoko :
Tsy misy hidiran'ny China Unicom mihitsy io fahatapahana io. I Google no tokony homelohina, satria izy tsy manana orinasa miasa ao Shina. Mangataka ireo orinasa sahala amin'i Google na Twitter na Facebook aho, mba hanome tolotra aty Shina ary hanaiky [fiambenana mifanaraka amin'izany].
Mitovy amin'ireo firenena hafa, manana fomba fitantanana mametra ny zavatra azo jerena ao amin'ny Aterineto, mety ho lasa zavatra takian'i Shina ho tsy maintsy arahan'ireo mpamatsy tolotra amin'ny Aterineto avy any ivelany, sahala amin'ireo sehatra media sosialy, ny fanivànana ireo votoaty apetrak'ireo mpampiasa azy ireo, raha toa ka tian'izy ireo ny mbola ho afaka hidirana ao amin'ny firenena.
Raha nanazava ny fiovan'ny fepetra fanivànany tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity, naboraky ny LinkedIn fa nahazo fangatahana tamin'ireo manampahefana Shinoa ny vohikalany amin'ny fiteny Sinoa, natomboka ny volana Febroary 2014, mba hanivana ny votoaty hita ao tamin'ny volana Jona 2014. Mba hitazonana ny vohikala ho azo idirana ao Shina, nanaraka ilay fangatahana ny LinkedIn ary nanomboka nanivana ireo famoahana saropady nalefa tao tsy hiseho, miaraka amin'izay ihany, tsy afaka jeren'ireo olona maneran-tany ireo votoaty manelingelina nalefa avy any Shina, izany no natao dia mba “hiarovana ireo Shinoa mpampiasa azy amin'ny fanenjehan'ny mpiasan'ny governemanta,” raha araka ny nanazavan'ny  mpitondra tenin'ny LinkedIn azy
Na dia afaka hidirana aza ny LinkedIn any Shina amin'izao, mbola voafetra ihany ny fahafahan'ireo mpampiasa ao amin'ny taniben'i Shina ilay vohikala. Araka ny nofaritan'ireo vondrona maro mpiaro ny zon'olombelona, mametra ny fifaneraseran'ireo Shinoa amin'ny tany hafa ilay politika “famerana maneran-tany” nataon'ny LinkedIn – ary manitsakitsaka ny zon'ireo mpampiasa ivelan'i Shina.
Tsy mbola notononina ny fanapahan-kevitry ny fitsaràna tamin'ny fitoriana nataon'i Wang Long. Raha ny ankamaroan'ireo mpisera amin'ny Aterineto no tsy manantena ny hitondràn'ilay fitoriana fanazavana misimisy kokoa ho an'ireo olona amin'ny fisalasalàny ary fanazavana araka ny lalàna ilay fibahanana, dia manohy mankasitraka  hatrany kosa ny fiezahan'i Wang Long nitory ny andraikitry ny ao amin'ny governemanta amin'ny fanitsakitsahana ny zon'ireo olom-pirenena amin'ny fahazoana mampiasa malalaka ny Aterineto ry zareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/10/02/64194/
 Tsy afaka nidirana: http://www.nytimes.com/2014/06/03/business/chinas-battle-against-google-heats-up.html
 ny fandraisana ambavany: http://www.jianshu.com/p/f808da9b9746
 araka ny naelin’: http://lusongsong.com/blog/post/1032.html